Mas’uuliyiinta dalka Masar ayaa baaraya saxnimada muuqaal laga soo duubay lamaane u dhashay waddanka Denmark oo iyagoo qaawan dusha sare ka saarnaa ahraamta la qaddariyo ee ku yaalla Giiza-ha. | Biyoguurenews.com
Home Wararka Mas’uuliyiinta dalka Masar ayaa baaraya saxnimada muuqaal laga soo duubay lamaane u...
Mas’uuliyiinta dalka Masar ayaa baaraya saxnimada muuqaal laga soo duubay lamaane u dhashay waddanka Denmark oo iyagoo qaawan dusha sare ka saarnaa ahraamta la qaddariyo ee ku yaalla Giiza-ha.
Dhacdadan lamaanahaas lagu eedeeyay ayaa abuurtay caro weyn oo ay muujiyeen shacabka dalka Masar oo ah waddan aad looga tix galiyo diinta islaamka.
Dacwad oogeyaasha masaarida ayaa xaqiijin doona in muuqaalkaas uu sax yahay, haddii ay taas ogaadaanna waxay baari doonaan sida ay lamaanahaas ugu suurta gashay iney fuulaan mid ka mid ah ahraamta oo uu dhirikiisu yahay 140 mitir, sida uu qoray wargeyska ay dowladdu leedahay ee lagu magacaabo Al-Ahram.
Saraakiisha ayaa markii hore shaaciyay in muuqaalkaas uu yahay mid been abuur ah oo aan waxba ka jirin.
Ahraamta cajiibka ah ee Masar, oo sidoo kale loo yaqaanno Khufu ayaa ka mid ah toddobada mucjiso ee adduunka, kuuwaasoo ka haray dadkii hore.
Nin sawir qaade ah ayaa sheegay in isaga iyo haweeney saaxiibaddiis ah ay muddo saacado ah dhuumaaleysanayeen, ka hor inta aysan fuulin dhismaha ahraamta.
Wasiirka wasaaradda qaabilsan arrimaha la xiriira waxyaabaha qadiimiga ah ee dadkii hore ee masaarida ayaa maalintii Axada ahayd xildhbaannada baarlamaanka u sheegay in dacwad oogeyaasha ay hadda baarayaan suurta galnimada in lamaanaha reer Denmark “ay goobtaas caanka ah ku dubeen muuqaal galmo ah” iyo in kale.
Khaalid al-Canaani, oo uu soo xigtay wargeyska Al-Ahram ayaa sheegay in saraakiisha laga dalbaday iney xaqiijiyaan saxnimada muuqaalkaas, isla markaana dacwad ku soo oogaan sarkaal walba oo lagu helo inuu dayacaad sameeyay.
In anshax xumo lagu sameeyo goobahaas ayuu ku tilmaamay ” mid gabi ahaanba mamnuuc ah” wuxuuna intaas ku daray in sawirradaas ay yihiin “kuwo niyad jabinaya shacabka”
Maxaa ka muuqda muuqaalka?
Muuqaalkan ayaa isagoo saddex daqiiqo ah oo la jarjaray la soo galiyay ciwaan uu youtube-ka ku leeyahay sawir qaadaha reer Denmark oo lagu magacaabo Andreas Hvid.
Inta uu socdo muuqaalka oo habeenimo la duubay waxaa la arkayaa haweeney kor u fananeysa ahraamta qadiimiga ah oo uu sawir qaadaha ku tilmaamayay inuu ahaa kan ugu dheer ahraamta ku taalla goobtaas.
Waxaa qeybaha dhexe ee muuqaalka soo galaya sawir muujinaya lamaanaha, oo haweeneyda aan wajigeedda la arki karin, iyagoo garabka is heysta oo saaran dusha sare ee ahraamtaas oo dhisnaa muddo 4,500 oo sano.
Qeybaha dambe ayaa laga arkayaa haweeneyda oo iska siibeysa dharkii ay qaarka hore ku qabtay kuna sii jeedda muuqaalka habeenimo ee magaalada Qaahira.
Sawir qaadaha ayaa sidoo kale muuqaalka ku soo daray sawir muujinaya lamaanaha oo iyagoo qaawan isku dul jiifa dusha sare ee mid ka mid ah ahraamta, xilli maalin ah.
Sidee looga fal celiyay?
Muuqaalka iyo sawirrada oo isbuucii hore si weyn ugu faafay baraha xiriirka bulshada ayaa abuuray caro ka imaaneysay dadweynaha dalka Masar iyo qeybaha kale ee caalamka, iyadoo dad fara badan ay dhacdadaas u arkeen mid ixtiraam darro ku ah taariikhda soo jireenka ah ee Masar iyo dhaxalka dadkii hore.
Haweeney ka mid ahayd dadkii barta facebook-ga uga jawaabay muuqaalka Mr Hvidi ayaa qortay sidan: “Bal eeg ceebta noocan ah. Kani waa hab dhaqan gabi ahaanba xushmad darro ah oo lagu sameynayo dhul kale, dhaqan kale, hab nololeed kale… waxan waxay muujinayaan faham darro ku aaddan xurmeynta diin kale iyo dhaqan kale”.
Dadka ka soo jeeda waddanka Denmark ayaa sidoo kale caro ka muujiyay arrintan oo ay cambaareyn dusha uga tuureen.
Hase ahaatee, madaxa golaha dhowrista taariikhda qadiimiga ah ee dalka Masar Mostafa al-Waziri, oo uu soo xigtay wargeyska al-Masri al-Yowm, ayaa sheegay in muuqaalkan uu noqon karo mid la been abuuray.
Waxan oo kale horay ma u dhaceen?
In ahraamta mucjisada ah la fuulo waxaa la mamnuucay sannadihii 1980-meeyadii, ka dib markii ay dad dalxiiseyaal ah ku geeriyoodeen iyagoo isku dayaya iney fuulaan.
Laakiin go’aankaas ma uusan hor istaagin dadka sharciyada jabiya.
Sannadkii 2016-kii, nin dhallin yaro ah oo u dhashay dalka Jarmalka ayaa laga mamnuucay inuu waligiis dambe booqasho ku tago waddanka Masar, ka dib markii la qabtay isagoo fuulaya ahraamtaas qadiimiga ah, xilli uu doonayay inuu sawirro iyo muuqaallo ka soo sameysto.
Waxaa u suurta gashay inuu ka badbaado xarig saddex sano ah, maadaama dacwad oogeyaasha Masaarida ay go’aansadeen inaan dacwaddaas lagu soo oogin.
Hal sano ka dib qof u dhashay dalka Turkiga ayay booliska Masar xireen ka dib markii uu isku dayay inuu ahraamtaas fuulo.
Sannadkii 2015-kii, mas’uuliyiinta Masaarida ayaa baaritaan ku sameeyay muuqaal la shaaciyay oo muujinayay falal qaawani iyo galmo ah oo ay koox ku hadleysay luuqadda ruushka ku sameeyeen meel u dhow Giiza-ha.
Waddanka Masar oo shareecada Islaamka si wanaagsan looga dhaqmo ayaa sannadihii la soo dhaafay maxkamadeeyay dad magac ku leh bulshada oo lagu helay iney falal anshaxa wanaagsan ka hor imaanaya ku sameeyeen bulshada dhexdeeda.
10 maalmood uun ka hor, haweeneyda jilaaga ah ee lagu magacaabo Rania Youssef ayaa looga yeeray maxkamadda, iyadoo wax laga weydiinayay sababta ay u soo xiratay dhar jirkeeda looga arki karay, xilli ay ka qeyb galeysay munaasabad feesto ah.
Previous articleWasiirka Gadiidka Oo Maanta Hor Tagay Golaha Wakiilada Somaliland
Next articleGabadh Soomaali ah oo doorasho kaga guuleysatay ganacsade caaan ah